सभामुख महरा प्रकरण : हिजोदेखि बेपत्ता पारिएकी ती महिलाले किन फेरिन् बयान ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
सभामुख महरा प्रकरण : हिजोदेखि बेपत्ता पारिएकी ती महिलाले किन फेरिन् बयान ? (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४३७ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।